Honor 9 Lite: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Eder Ferreño | | Finday
Toa tapa-kevitra ny hanohy hanolotra fitaovana hatramin'ny faran'ny taona i Huawei. Ny marika sinoa dia nanambara maodely maromaro nandritra ny herinandro vitsivitsy, na teo ambanin'ny marika na i Honor. Ankehitriny, nambara ny kinova vaovao iray amin'ny telefaona mahomby indrindra amin'ny marika. Ny Honor 9 Lite dia ofisialy izao. Efa naseho ny antsipiriany rehetra momba ity fitaovana ity.
Tonga ny Honor 9 Lite hifaninana amin'ny sokajy antonony, iray amin'ireo sarotra indrindra eo amin'ny tsena. Satria goavana ny fifaninanana ao. Na izany aza, mijery ny endrikao sy ny mombamomba anao, ity dia telefaona mety hivarotra tsara. Inona no azontsika antenaina amin'ity fitaovana ity?
Misarika ny maso avy hatrany ny famolavolana ilay fitaovana. Na ho an'ny loko nofidin'ny marika, na ho an'ny efijery. Koa satria ny filokana Honor dia miloka eo amin'ny efijery tsy misy frame miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 lamaody manao ahoana izy ireo eny an-tsena. Ilay fitaovana koa dia manana sensor ho an'ny dian-tànana ao aoriana.
1 Famaritana voninahitra 9 Lite
Famaritana voninahitra 9 Lite
Ny famaritana ny fitaovana feno dia naseho ankehitriny. Ka efa fantatsika daholo ny momba an'io. Ity no azontsika antenaina amin'ity fitaovana ity:
Personalization sosona: EMUI 8
efijery: LCD LCD IPS 5,65
Fanapahan-kevitra sy hakitroky: FullHD +, 2160 x 1080 teboka, tahan'ny 18: 9
processeur: Kirin 659, Octa-core (4 × 2.36 GHz Cortex-A53 & 4 × 1.7 GHz Cortex-A53)
ram: 3 na 4 GB
Fitahirizana anatiny: 32 na 54 GB (Azo avela hatramin'ny 256 GB)
Fakan-tsary eo aloha: Dual 13 + 2 MP
Fakan-tsary Rear: Dual 13 + 2 MP
bateria: 3.000 mAh miaraka amina fiampangana haingana
ny hafa: Mpamaky rantsantanana aoriana, SIM Dual
lafiny: 151 x 71.9 x 7,6 mm
lanja: 149 grama
loko: Manga, fotsy, fotsy ary mainty
Mihoatra ny fanarahana ny fitaovana. Ho fanampin'izany, hitantsika ny fisian'ny fakantsary efatra amin'ny fitambarany. Ka zavatra tsara no antenaina avy amin'ireo fakantsary ireo. Izy io koa dia misy fantsom-panaovana rantsantanana amin'ny lamosiny, hahafahana manafoana ny fidirana aminy.
Ny Honor 9 Lite dia misy manomboka anio any Shina. Ireo mpampiasa ao amin'ny firenena Aziatika dia efa afaka atao miaraka amin'ity elanelan-tany ity. Ho an'ny tsena ambiny, anisan'izany i Eropa, ny fitaovana dia antenaina ho tonga amin'ny herinandro ho avy. Ka tsy maintsy miandry hatramin'ny Janoary isika vao hividy ny Honor 9 Lite.
Mikasika ny vidiny, miankina amin'ny fifangaroana voafantina dia misy ny vidiny samihafa. Ireo ny vidiny amin'ireo kinova samihafa an'ny Honor 9 Lite:
3GB RAM / 32GB fitehirizana: Vidiny 159 euro
3GB RAM / 64GB fitehirizana: Vidiny 199 euro
4GB RAM / 64GB fitehirizana: Vidiny 229 euro
Ahoana ny hevitrao momba ity telefaona Honor vaovao ity? Hahomby eo amin'ny tsena ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Honor 9 Lite dia ofisialy izao, fantaro ny masontsivana!
Avy amin'ny Google avy amin'ny Google, tena mahavonjy angona ve?